यसपालि साहित्य मेला भर्चुअल
byShyam Rana magar - December 19, 2020
हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि आईएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल पोखरामा आयोजना हुँदै छ । फेस्टिभलको नवौं संस्करण पुस १४ र १५ गते भर्चुअल रुपमा चल्ने छन् ।
यो कोरोनाले पनि के के गरायो गरायो ?
समय उस्तो हुन्थ्यो त लिटरेचर फेस्टिभलको रौनक नै छुट्टै हुन्थ्यो । साहित्यप्रेमी र साहित्य लेख्नेहरुको मेलालाई यो वर्ष भने कोरोनाले झेल ग¥यो । भर्चुअल सही साहित्य मेला आयोजना हुँदै छ । यही गजबको बात हो ।
फेवा किनारमा हुँदै आएको साहित्य मेला यसपालि सराङकोटमा माछापुछ«े पृष्ठभुमी राखेर हुने रे ! वक्ताहरु मात्रै मञ्चमा उभिएर सेसन चलाउँदा अलि खल्लो छ हुन्छ नै, तैं पनि साहित्य मेलाको नवौं संस्करणले साहित्यप्रेमीहरु खुसी भएका छन् ।
साहित्य मेलाबारे जानकारी लिन आयोजक संस्थाका आदरणीय दाइ केशव लामिछानेको निम्तो त पाएको थिएँ । कारणबश जान सकिनँ । खैर, जिमेलमै डिटेल आई पुगेको रहेछ ।
आयोजक संस्थाको अफिसियल युट्युब, फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्न र सुन्न सकिने छ । मन परेका वक्ता र मन पर्दा सेसनलाई तपाईँहरु पनि समय निकालेर सुन्नुस् अनि हेर्नुस् ल ...
यस्तो छ कार्यक्रमतालिका
Tags: blog literature